Hery - Tsiky dia ampy | Ankapobeny | 4
2009-10-16 @ 09:07 in Ankapobeny
Tsara kosa ilay undo send ao amin'ny GMail. Rehefa mampiasa GMail (na @serasera.org) ka mampiditra an'ilay "Undo message" avy ao amin'ny labs dia afaka sintomina tampoka ny hafatra lasa. Izany hoe raha tapa-kevitra tampoka hoe aza alefa indray dia misy rohy milaza hoe "Undo send"... Misy fotoana manko manoratra ianao sady manao zavatra hafa dia voatsindry tampoka ilay hoe Alefaso... kanefa mbola tsy vita akory ilay hafatra.
Serasera: Ao Paris indray amin'ny 15 novambra 2008
2008-10-29 @ 22:11 in Ankapobeny, Serasera.org
Dia raikitra izany fa ao Paris indray no hihaona ny Namana Serasera Eoropa amin'ny 15 novambra 2008. Koràna no hatao amin'io. Jereo eto ny filazana ofisialy izay napetraky ny namana mpikarakara.
Mahafinaritra foana ny mihaona amin'ny namana serasera ivelan'ny virtualy. Manjary misy fifankahazoana am-po sy lasa tena mpinamana. Efa imbetsaka ihany no nisy fihaonana toa izao tao Paris, telo no efa natrehako fa ny hafa tsy tratra. Nisy koa tany Nice fa tsy tratrako. Nisy indroa koa teto Roma. Ary ny any Madagasikara dia matetika mihitsy.
Raha toa ka mahaliana dia azo jerena eto ny sary sy ny ambiansy tamin'ny herintaona.
Dia any indray izany mihaona e.
Baiboly andro aman'alina
2008-10-05 @ 22:08 in Ankapobeny
Misy zavatra mampientam-po eto Roma amin'ity herinandro ity. Nanomboka androany tamin'ny 7 ora hariva teo dia vakiana tsy ankijanona hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ao amin'ny fiangonana iray ny Baiboly. Ao amin'ilay Bazilika "Santa Croce in Gerusalemme" no anaovana an'izany ary olona avy amin'ny firenena samihafa, finoana samihafa, sokajy samihafa, no mifandimby mamaky ao.
Plugoo sao dia mahasoa
2007-05-10 @ 08:54 in Ankapobeny
Efa manomboka miely ny fitaovana fametrahana hafatra mivantana izay karazana chat fa apetraka amin'ny site. Fa ity anakiray ity no hitako mahafinaritra indrindra amin'izao fotoana izao... ny anarany dia Plugoo ary ny misy azy dia ao amin'ny Plugoo.com. (tohiny)
2007-04-18 @ 16:39 in Ankapobeny
Mba hahafahana mamaky ity lahatsoratra ity dia ampiasao ny tenimiafina test